Fifandonana hosoka alemà tsy misy lasaka (miaraka amin'ny lohataona)
Ny fifandonana hose karazana alemà tsy misy lasantsy (miaraka amin'ny lohataona) fantsom-pako ravina alemà hafa dia karazana fiakarana hose karazana alemà tsy mandehandeha, izay ravina lohataona ao anaty peratra fehikibo. Ny famolavolana asymmetika dia manakana ny hidona fantsona tsy hihodina rehefa manamafy ny fitombenana, izay ahafahana miantoka ny fampitana fanamafisana ny hery ary ny fiarovana amin'ny fametrahana mandritra ny fanamafisana. Ity clamp ity dia afaka manafa-jaza marefo.
Fifandonana hosotra alemà tsy misy lasitra
Ny close hose karazana Alemà dia hafa noho ny kitapom-bolan'ny goavambe eran-tany satria natao mba hisorohana ny fahasimban'ny hose mandritra ny fametrahana.
Fifandonana hosotra alemà
Ny fifamenan'ny hossaina Alemana dia manana bandwidth 9mm sy 12mm, mipetaka ny tenda.
Fifandonana hose alikazy mifampitantana
Ny fifangaroan'ny hosotra alemà miaraka amin'ny tànana dia mitovy amin'ny claut hose karazana. Izy io dia manana bandwidth lehibe miisa 9mm ary 12mm. Ny fametahana plastika dia ampiana amin'ny sakamalaho.